Mba maka maloegekh
Ebee ka ha na-eri nri ọ bụghị n'ụzọ okenye?
Obere ụmụaka nwere ike isi ike ịzụ. Ha nwere ike ịchọrọ sweets na ice cream ma hapụ ihe ọ bụla bara uru ma na-edozi ahụ. Ụlọ oriri na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ọtụtụ mba na-enyekarị ụmụaka nri pụrụ iche nke ụmụaka, nke ga-eme ka agụụ gụgbuo ya ọbụna nwatakịrị kachasịnụ. Ndị ọkachamara na Level.Travel, ọrụ maka ire ere ahịa na netwọk sitere na 20 ndị na-eme njem nlegharị anya na Russia, dekọtara ndepụta ebe ebe ụmụaka ga-ahụ ihe niile tọrọ ụtọ.
A naghị enye efere maka ụmụaka nọ na Russia n'ebe niile, ma otu nwere ike ịchọta njem nleta na ụlọ ndị Sochi, ebe ha chepụtara ihe oriri ha maka ụmụaka ma ọ bụ na e nwere ihe ụmụaka dị iche. Otú ọ dị, ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ adịghị edozi, ị nwere ike iri nri na cafe. N'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị na Sochi na Russian, Ịtali, Georgian na ọbụna nri Japanese, e nwere ndepụta maka ụmụaka na ọnụ ahịa dị oke ọnụ. N'ebe a, ị nwere ike inye, dịka ọmụmaatụ, ofe ọkụkọ, obere burger, pizza, pasta na ara na ọkụkọ na broccoli, poteto ndị a kụrụ akuku na milkshakes. Ntakịrị ihe oriri dị ala na ịbanye n'ụlọ Crimea. Ụmụaka nwere ike ịhọrọ salads - na kabeeji ma ọ bụ na tomato, ọkụkọ na cheese cheese, meatballs na ude nri ụtọ, obere pizza na apụl. Okwesiri ka ezinyere ezinulo bu ihe ndi ezumike na "nri nri nri nri ehihie", mgbe n'etiti ehihie ka i nwere ike iri nri na osimiri na mkpuru osisi ma obu gaa cafe si n'osimiri. Ya mere, ihe oriri ahụ na-adịwanye iche, karịsịa ma ọ bụrụ na họpụtara ụlọ nkwari akụ maka ntụrụndụ, bụ nke, dịka iwu, ndị na-eme njem nleta na-enye otu ụdị efere. N'otu oge ahụ, njem abụọ ga-aga na ntụrụndụ Russia dị nnọọ ọnụ ala karịa usoro ntinye aka niile.
N'August, ọnụahịa nke njem ezumike nke izu ụka nke otu ụlọ ezumike Russia maka ezinụlọ nke nwere nwa afọ abụọ na-amalite na 32,000 rubles - na ụgbọ elu na ebe obibi, ma na-enweghị nri.
Na Turkey, ọtụtụ ezinụlọ na-eme njem pụrụ iche maka usoro nri nri niile, nke hotels na mba a na-enye na ọnụ ala dị ala. N'otu oge ahụ, ndị nne na nna nwere ohere iji na-enye ụmụ ha nri na akwụkwọ nri ọhụrụ mgbe nile, na ịhọrọ ọkụkọ, anụ ma ọ bụ azụ maka nri ehihie na nri abalị. Ịzụta njem, a ghaghị iburu n'uche na ụlọ ọnụebe ahụ dị ọnụ ala karị, ọ ka mma ma dị iche iche na nchịkọta nhọrọ. Na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke nnukwu ụlọ oriri maka nri ụtụtụ, e nwere ụlọ ahịa mgbe niile na yoghurts ndị dị n'ụlọ, ụdị ọka dị iche iche na muesli, nakwa na vitamin mmanya ị nwere ike ịgbanye ihe ọṅụṅụ dị ọhụrụ. Na tebụl ụmụaka ga-abụ nchịkọta bara ụba nke anụ ndị dị ala na abụba, tinyere sows na broths. Na-esote ngwaahịa ndị a siere ike ịbụ ndị na-agwakọta ihe, nke mere na ndị nne na nna na-eri nri ụmụ ha. Ụmụaka na ihe oriri ga-eju ha anya - ọtụtụ n'ime ha nwere ike ghara ịgụta ụda Turkish. Iwu iwu kwesịrị itinye mkpụrụ osisi: Turkish oranges, green and red apples, plum, strawberries, mkpụrụ vaịn na cherị. Ọ bụrụ na ụlọ nkwari akụ ahụ na-efu ihe, ị nwere ike ịga ahịa ahịa nri mpaghara. Site n'ụzọ, na ụfọdụ hotels maka ụmụaka ndị kasị sie ike bụ ọrụ nke ịnye nri ụmụaka dị ka ndenye ọgwụ gị. A ga-enyefe efere gị n'ebe a na-ahọpụta gị - n'ime ụlọ ma ọ bụ n'ime ọdọ mmiri ahụ. Ị nwekwara ike iguzo na stovu na kichin nke ụlọ ụmụaka, Otú ọ dị, dị ka a na-achị, ọ dị ntakịrị mkpa maka hotels dị na Turkish hotels.
N'August, ọnụ ahịa nke njem otu izu na Turkey maka ezinụlọ nwere nwa dị afọ abụọ na-amalite site na 45,000 rubles - na ụgbọ elu, ebe obibi na nri na System All Inclusive.
N'ihe dị iche iche nke ụmụaka na-atọ ụtọ, ọ na-esiri ike ịchọta nwatakịrị na-adịghị amasị onyinye. Kedu ihe ndị na-eme n'oge ochie abịaghị n'Ịtali! Nke a na spaghetti, na fettuccine, na ọbụna obere ravioli ravioli. Na ọtụtụ ụdị nri na nri - site na tomato na anụ, na ude na ihe oriri. Maka nri ntanetị, nwatakịrị ahụ nwere ike ịme ka ice ice a ma ama, nke a na-ewere dịka ihe kacha atọ ụtọ n'ụwa. Ịhọrọ Ịtali maka ntụrụndụ, ọ ga-eburu n'obi na ọtụtụ hotels na-enye ndị ọbịa ha nri naanị ụtụtụ: dị ka a na-achị, ndị njem nleta nwere nri ehihie na nri abalị na ụlọ oriri. Ọtụtụ ụmụaka ndị na-adịghị eri salads tupu, mgbe ha gachara njem na Italy, malite ịhụ cucumbers na tomato. Tụkwasị na nke ahụ, ụfọdụ na-amalite ịmalite ịghọta ụtọ nke Parmesan na mozzarella. Karịsịa umuaka enweghi ike iwepu ya site na mkpuru osisi - i nwere ike iji ubochi, oranges na strawberries mee ubochi dum n'osimiri osimiri ma nwee nani nri na otu n'ime nturu nturu na mgbede. O nwedịrị ike ime na mgbe ịlaghachiri ezumike, nwa ahụ ga-amalite ịrịọ maka nri abalị ụfọdụ minestrone ma ọ bụ spaghetti pụrụ iche, "dị ka n'Ịtali".
N'August, ọnụ ahịa nke njem ọ bụla n'izu ruo Ịtali maka otu ezinụlọ nwere nwa dị afọ abụọ na-amalite na 66,000 rubles - na njem, ebe obibi na ezumike.
A na-enyekarị ndị ọbịa na Tunisia nri na usoro niile gụnyere. N'eziokwu, a ga-edozi menu maka ọdịnala ndị na-esi nri anụ ọhịa, yabụ nwatakịrị ahụ ga-anwale ọtụtụ efere dị iche iche iji họrọ ndị na-amasị ya. Usoro a "ihe niile" n'echiche a dị mfe n'ihi na n'adịghị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ ị ga-akwụ ụgwọ maka nri, nke kpatara ihe kpatara ya na efere. Otú ọ dị, a pụrụ ịhụ ụdị dịgasị iche iche na obodo ndị dị elu. Ọ bụ na nnukwu nnukwu ụlọ ndị nwere akụrụngwa akụrụngwa ndị chefs nwere ike esi nri na tọrọ ụtọ, na ọ bara uru, dịka ọmụmaatụ, nri nri. N'okpuru ụmụaka ị ga-ahụ osikapa, poteto poteto, na nsị ma ọ bụ akwụkwọ nri. Anụ na-esikwa na stewed, azụ - esi nri, na ụdị ọka dịgasị iche iche anaghị eme ihe ọ bụla, ka nne na nna nwee ike ịhọrọ ihe ndị ọzọ. Ọzọkwa na hotels ndị dị na Tunis nwere mkpụrụ osisi dị iche iche. Nri ụmụaka maka umu ọhụrụ anaghị eburu ha - a na-ere potars na pothed potatoes maka ụmụ ọhụrụ na ụlọ ọgwụ niile. Mana o kwesiri iburu n'uche na umuaka umuaka adighi di na hotels. Ya mere, mgbe ị na-ahọrọ njem, ọ bara uru ịmatakwu banyere ihe a na-enye ebe ị ga-eji ezumike gị.
N'August, ọ na-amalite site na otu puku afọ na Tunisia n'ihi ezinụlọ nke nwere nwa abụọ dị na 84,000 rubles - na ụgbọ elu, ebe obibi na nri na usoro niile gụnyere.
Nwa ahụ anaghị achọ iri osikapa? N'ihi ya, ndị nne na nna amaghị otú e si esi ya! Na Spain, osikapa bụ isi ihe na paella, nri a ma ama na-eri nri. Enwere ike inye iwu maka ndị ezinụlọ ya niile n'enweghị ihe ọ bụla, ụmụaka ga - enwekwa ike ịchọta nnukwu efere ihe ha chọrọ - squid, ogwu ma ọ bụ mikpu. A na-enyefe ụmụaka ndị ọzọ ụdị nri ndị ọzọ maka ụmụaka Pizza na ụmụ anụmanụ, sausages, fries French na nri ndị ọzọ ngwa ngwa n'akụkụ ọ bụla. A na-ahụkwa ihe ndị yiri ya na ụlọ nri ndị ụmụaka. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị nne na nna ji anwa ịme ụmụaka ka ha rie nri. Dịka ọmụmaatụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na tomato esiri tomato siep. N'eziokwu, a ghaghị inye iwu ka ọ ghara ịdị oyi. Osisi ome ome na salad nke akwukwo nri ohuru ma obu ihe a na-akpọ "poteto n'ime canary" - sie ya na mmiri nnu, wee sie tubers - ga-adikwa uto. Ọtụtụ ụmụaka na-asọpụrụ pancakes chụrụ na anụ, jupụtara na béchamel ihendori ma fesa ya na cheese. Ọfọn, maka eji megharịa ọnụ, ị nwere ike ịhọrọ charamel nke "catalan ude", donuts "bunyols" ma ọ bụ "churros" biscuits, nke a na-etinye na chocolate. N'ógbè dị iche iche nke Spen, omenala ha, ọ ka mma ịchọta nke ọma ụdị efere ị ga-enye iwu.
N'August, ego ole ị na-aga na Spen maka otu izu maka ezinụlọ nke nwere nwa nwoke dị afọ abụọ na-amalite site na 97,000 rubles - na ụgbọ elu, ebe obibi na nri ụtụtụ.
Essentuki - ebe nkiri
Kedu ihe ị ga - eji gị gaa njem mgbochi?
Sicily - ebe nkiri
Boeing 737 800 - nhazi ime
Ebee ka m ga-eso nwa ahụ gaa na New Year's Eve?
Kedu otu esi họrọ ụgbọ mmiri nwere ike ịnwụ?
Weather Dubai na ọnwa
Ulo oku maka ulo - uzo esi mezuo coziness kachasi?
Na ihe na-eyi jeans gbara?
Nbanye - ọtụtụ May nwere
Kedu ihe ga-esi nri maka nri ehihie?
Kedu vitamin ndị ka mma maka usoro ụjọ ahụ?
Viral conjunctivitis - ọgwụgwọ
Cystitis mgbe mmekọahụ
Ekele site na 80 si: 23 iche foto na ọ bụghị mmadụ niile ga-aghọta
Oké osimiri nke Santorini
29 ihe omuma nke omuma nke nwamba
Mpempe akwụkwọ denim nwanyị 2014
Echepụta ụlọ nzukọ ahụ n'ụlọ mmadụ